Furayaasha Bitbucket iyo SSH > Vielhuber David
Furayaasha Bitbucket iyo SSH01
Bixiyuhu ma bixiyo Bitbucket (xitaa khidmadaha ku saleysan khidmadaha caadiga ah iyo canshuuraha ) suurtagalnimada in lagu keydiyo furayaasha SSH oo leh xuquuqda qorista heerka keydka. Kaydinta furahaaga gaarka ah ee SSH ee server-ka wax soosaarka ikhtiyaar uma ahan, haddii kale waxaad ka heli kartaa dhammaan mashaariicda kale ee aad hadda ka shaqeyneyso halkaas. Waxaa jira waxa loogu yeero furayaasha gelitaanka , laakiin kuwani waxay kaliya oggolaanayaan xuquuqda akhriska.
Marka, haddii aad ku horumariso mashruuc mashruuc ka dibna aad ku dhex darto bakhaarkan waxsoosaarka wax soo saarka oo aad la heli karto qoritaan, waxaa jira laba ikhtiyaar: Ama inaad sameysato isticmaale kuu gaar ah (si aad u hesho shati iyo 5 ama in ka badan isticmaaleyaal) ujeedkan, ama waad u isticmaali kartaa Wakiilka SSH oo aan la aqoon soo gudbinta .
Nidaamkan waxaad dib u isticmaali kartaa furahaaga SSH ee kuugu jira server-ka fog kal-fadhiga hadda adiga oo aan si joogto ah u keydin fure halkaa. Dejintu waa fududahay: Marka hore waxaad hubisaa inaad si toos ah ugula xiriiri karto serverka fog iyo Bitbucket adoo adeegsanaya furahaaga SSH. Kadib ku bilaw wakiilka SSH mashiinkaaga deegaanka eval 'ssh-agent -s' kuna keydi furahaaga hadda ssh-add -k . Marka wakiilka loo diro la hawlgeliyo, waxaad hadda kula xiriiri kartaa server-ka fog adoo adeegsanaya ssh -A username @ host1 ka dibna waxaad geli kartaa keydkaaga Bitbucket adiga oo aan weydiin lambarka sirta ah ee dheeri ah, adigoon ku keydin furaha SSH ee serverka fog.
Beddelka kale ayaa ah u beddelashada adeeg bixiye gebi ahaanba ka duwan: GitLab, tusaale ahaan, waxay horay u bixisay kooto 10 GB (marka loo barbar dhigo 2 GB oo leh Bitbucket), tiro aan xadidnayn oo xubnaha kooxda ah iyo waxa loogu yeero furayaasha geynta canshuuraha bilaashka ah. Tani waxay ka dhigan tahay in tiro kasta oo furayaal dheeri ah oo SSH ah (tusaale ahaan laga soo qaatay server-ka wax soo saarka) lagu keydin karo bakhaar kasta, kaas oo siiya qoritaanka gelitaanka keydka.